रमाईसी समानता र विविधता प्रश्नोत्तरी - व्यक्तिगत विकास क्याफे
रमाईसी समानता र विविधता प्रश्नोत्तरी
पोस्ट व्यवस्थापक | जुलाई 18, 2018 | समानता र विविधता प्रश्नोत्तरी, समानता र विविधता, थप, क्विज |0|
चेतावनी: गणना (): पैरामीटर एक array वा एक वस्तु हुनु पर्छ जुन गणना योग्यमा लागू गर्दछ /home/oxonian/thepdcafe.com/wp-content/plugins/wp-quiz-pro/inc/class-trivia-quiz.php लाइन मा 36
1 समानता र विविधता के हो?
2 हाम्रो समानता र विविधता प्रश्नोत्तरी प्रयास गर्नुहोस्
2.1 कुन प्रतिशत पुराना कर्मचारीहरु विश्वास गर्छन् कि रोजगारदाताहरु उनीहरु बिच विभेद गर्छन्?
2.2 बेलायतमा सम्भ्रान्त पेशेवर र व्यवस्थापन भूमिकामा जातीय अल्पसंख्यकहरूको प्रतिशत कति छ?
2.3 40 वर्षको उमेरका महिलाहरूले समान उमेरका पुरुषहरू भन्दा कति कम कमाउँछन्?
2.4 समलि men्गी पुरुषहरूको कति प्रतिशत काममा लैंगिक भेदभावको कारण उनीहरूको यौनिकताको कारण ग्रस्त छन्?
2.5 कति प्रतिशत महिलाले काममा यौन उत्पीडनको सामना गरेका छन् वा अनुभव गरेका छन्?
2.6 40 भन्दा बढि युके कार्यबलको कुन प्रतिशत छ?
2.7 कामवासनाको कारण यौनसम्बन्धको कति प्रतिशत महिला समलैians्गिक भेदभावको सिकार भएका छन्?
समानता र विविधता भनेको जाति, लि ,्ग, उमेर, अशक्तता वा यौन झुकावको पर्वाह नगरी सबैलाई आफ्नो क्षमताको उत्तममा प्रगति गर्ने अवसर दिनु हो। त्यहाँ कानूनहरू छन् जुन विशेष रूपमा कार्यस्थलमा समानता र विविधतासँग सम्बन्धित छ।
सस्तो यात्रा र ग्लोबल मिडियाको बढ्दो पहुँचको कारण धेरै व्यक्तिहरूको लागि अधिक र अधिक सम्भावनाहरू हुन्छन्; अरूलाई सहिष्णुता र बुझ्नु पर्ने आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्न सकिने विषय बन्न गइरहेको छ।
समानता र विविधता के हो?
समानता र विविधता भनेको हामी मतभेदहरूलाई ध्यानमा राखेर सबैलाई समान व्यवहार गर्छौं। त्यसैले यो भन्न सकिन्छ कि हामी कसैलाई समान व्यवहार गरी उनीहरूलाई बिभिन्न व्यवहार गरी।
आज छविमा यति धेरै महत्त्व राखिएको छ कि कहिलेकाँही धारणाले वास्तविक तथ्यहरूलाई मास्क गर्न वा लुकाउन सक्छ। स्टेरियोटाइपहरू नकरात्मक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जब तथ्य गलत तरिकाले प्रस्तुत गरिन्छ। यद्यपि केही तथ्यहरू देखा पर्दा मानिसहरू छक्क पर्न सक्छन्।
हाम्रो समानता र विविधता प्रश्नोत्तरी प्रयास गर्नुहोस्
जे होस् यो समानता र विविधता प्रश्नोत्तरी बेलायतका बासिन्दाहरूको लागि बनाइएको हो, किन यो प्रयास नगर्ने र तपाइँ कसरी गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस्?
कुन प्रतिशत पुराना कर्मचारीहरु विश्वास गर्छन् कि रोजगारदाताहरु उनीहरु बिच विभेद गर्छन्?
75 भन्दा बढी%
चकित 90% पुराना कर्मचारीहरु विश्वास गर्दछन् कि रोजगारदाताहरु उनीहरु बिच विभेद गर्छन्।
जारी राख्नुहोस् >>
बेलायतमा सम्भ्रान्त पेशेवर र व्यवस्थापन भूमिकामा जातीय अल्पसंख्यकहरूको प्रतिशत कति छ?
30 भन्दा बढी%
2011 यूके जनगणनाले देखाउँदछ कि अल्पसंख्यकहरूले एलिनेट प्रोफेशनल र व्यवस्थापन भूमिकामा रहेका 10% बनाउँछन्।
40 वर्षको उमेरका महिलाहरूले समान उमेरका पुरुषहरू भन्दा कति कम कमाउँछन्?
60 भन्दा बढी%
सीएमआई (चार्टर्ड ब्यवसायिक संस्थान) ले भने कि 40 भन्दा बढी महिलालाई आफ्नो पुरुष सहकर्मीहरू भन्दा समान भूमिकाका लागि 35 प्रतिशत कम तिरेको छ।
समलि men्गी पुरुषहरूको कति प्रतिशत काममा लैंगिक भेदभावको कारण उनीहरूको यौनिकताको कारण ग्रस्त छन्?
गुइलाउम पउमियर द्वारा छवि
19% समलिay्गी पुरुषहरूले आफ्नो यौनिकताका कारण काममा यौन भेदभाव भोगेका छन्।
कति प्रतिशत महिलाले काममा यौन उत्पीडनको सामना गरेका छन् वा अनुभव गरेका छन्?
50% महिला रिपोर्ट गर्छन् कि तिनीहरूले कष्ट भोगेका छन् वा काममा यौन उत्पीडनको अनुभव गरेका छन् - पुरुषहरूको लगभग 10% को तुलनामा।
40 भन्दा बढि युके कार्यबलको कुन प्रतिशत छ?
61 भन्दा बढी%
UK 33% बेलायतका कामदार 40० बर्ष भन्दा बढी उमेरका छन्। - 45 - year year वर्ष उमेरका कर्मचारीहरू सबैभन्दा ठूलो समूह बनाउँछन्।
कामवासनाको कारण यौनसम्बन्धको कति प्रतिशत महिला समलैians्गिक भेदभावको सिकार भएका छन्?
LeeHoffmanPhoto द्वारा छवि
31 भन्दा बढी%
12% समलिb्गीले यौनको कारण काममा यौन भेदभावको सिकार भएका छन्।
समानता र विविधता प्रश्नोत्तरी
तपाईंलाई थप अभ्यास चाहिन्छ!
पढ्नुहोस् समानता र विविधता के हो वा हेर्नुहोस् हाम्रो भिडियो थप जानकारी प्राप्त गर्न।
तपाईको नतीजाहरु साझा गर्नुहोस्:
प्रयास जारी राख्नु!
तपाईंसँग समानता र विविधताको ठूलो ज्ञान छ। पढ्नुहोस् समानता र विविधता के हो वा हेर्नुहोस् हाम्रो भिडियो थप जानकारीको लागि।
बधाई छ - तपाईं जस्तो व्यक्ति आफैलाई मात्र थाहा छैन, तर अरुहरुलाई। पढ्नुहोस् समानता र विविधता के हो वा हेर्नुहोस् हाम्रो भिडियो थप जानकारीको लागि
बस हामीलाई भन्नुहोस् कि तपाईं आफ्नो नतिजा हेर्न चाहानुहुन्छ!
तपाईंको पहिलो नाम:
तपाईँको ई - मेल ठेगाना :
मेरो परिणाम देखाउनुहोस् >>
कृपया तपाईको नतीजा हेर्नका लागि यो क्विज साझा गर्नुहोस्।
हामी आशा गर्दछौं कि तपाईंले यो समानता र विविधता प्रश्नहरू रमाईलो गर्नुभयो। कसरी तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न छनौट तपाईं मा निर्भर गर्दछ।
यदि तपाईं एक संगठन वा कम्पनी सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने, हुनसक्छ यो छोटो प्रश्नोत्तरीले तथ्यहरू हाइलाइट गरेको छ जसको बारेमा तपाईंलाई थाहा थिएन, विधिहरू जुन तपाईं आफ्नो संगठन सुधार गर्न सक्नुहुनेछ?
बेलायतमा समानता र विविधताका बारे थप जानकारी र डेटाका लागि भ्रमण गर्नुहोस् मानव अधिकार वेबसाइट।
समानता र मानव अधिकार आयोगको एक उत्कृष्ट वेबसाइट छ जसले समानता कानून र मानव अधिकारमा आधारित अधिकार, जिम्मेवारी र राम्रो अभ्यासको बारेमा सल्लाह र मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ। उनीहरू समानता र विविधता कार्यशाला रिपोर्टहरू प्रकाशित गर्दछन् र एक हेल्पलाइन संचालन गर्छन्।
धेरै देशहरूको आफ्नै कानून र अभ्यासहरू हुन्छन्। युके पृष्ठमा हाम्रो समानता कानूनले बेलायतको वर्तमान अभ्यासहरूको लागि एक उपयोगी गाइड प्रदान गर्दछ। हाम्रो प्रयोग गर्नुहोस् सम्पर्क फारम यदि तपाइँ तपाइँको देशको लागि जानकारी थप्न चाहानुहुन्छ भने।
के तपाईं आफ्नो ज्ञान र समानताको विविधता र विविधताको अनुभव साझा गर्न चाहानुहुन्छ? तपाईंको टिप्पणीहरू थप्नुहोस् वा तल टिप्पणी फार्मको प्रयोग गरेर पोष्ट गरिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्।
पछिल्लोदेश द्वारा काम खोज
अर्कोनमूना गोदाम अपरेटिव CV टेम्पलेट
लोकप्रिय प्रेरणादायक भिडियो छोड्नुहोस्
फेब्रुअरी 5, 2019
प्रेरणादायक व्यक्तिगत विकास उद्धरण - डेल कार्नेगी उद्धरण र भनाइ
जीवन प्रेरणादायक भिडियोको यात्रा
10 ग्रेट ब्रायन ट्रेसी प्रेरक उद्धरण